मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल भर्ना – Sandes Post
मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल भर्ना
May 2, 2022 1130
काठमाडौं । बलिउडका दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीका फ्यानहरु अभिनेताको तस्विरका कारण निकै दुखी छन् । अस्पतालको बेडमा सुतेको अभिनेताको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अभिनेताको स्वास्थ्यलाई लिएर विभिन्न हल्लाहरु पनि उडिरहेका छन् ।
अस्पतालबाट मिथुनको तस्विर विभिन्न प्लेटफर्ममा शेयर भइरहेको छ । मिथुनका छोरा मिमोह चक्रवर्तीले अहिले अभिनेताको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने– मिथुन चक्रवर्तीलाई मिर्गौलामा पत्थरीको समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । भाइरल तस्बिर अस्पतालकै हो, जसमा उनी बेहोश अवस्थामा बेडमा पल्टिएका देखिन्छन् । तर अहिले अभिनेताको स्वास्थ्य पूर्णरुपमा ठीक छ र उनलाई बैंगलोरको अस्पतालबाट डिस्चार्ज पनि गरिएको छ । उनी पूर्ण रूपमा फिट र ठीक छन्।
मिथुन चक्रवर्तीको स्वास्थ्य अपडेट आएपछि उनका लाखौं फ्यानले राहतको सास फेरेका छन् । सबैले कलाकारको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् ।
भाजपा राष्ट्रिय सचिव डा. अनुपम हजराले पनि मिथुन चक्रवर्तीको तस्बिर आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा सेयर गरेका छन् र अभिनेताको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।
मिथुन चक्रवर्ती हालै कलर्सको शो हुनरबाजमा देखिएका थिए । मिथुन चक्रवर्ती यस शोका जज थिए र शोमा उनले आफ्नो विशेष स्टाइलले दर्शकहरूलाई धेरै मनोरञ्जन दिए। मिथुन यस वर्षको ऐतिहासिक फिल्म द कश्मीर फाइल्समा पनि देखिएका थिए । फिल्ममा उनको अभिनयको निकै तारिफ भएको थियो ।
Prevएक्कासी किन घट्यो १५० सि-सी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै ?
Nextपल शाहलाई भेट्न जादा आम्नेसाम्ने दुर्गेश र प्रकाश , कारागारभित्र पल शाह दुब्लो देखिए , चप्पल लगाएका थिए , यस्तो छ अवस्था (हेर्नुस् भिडियो )
गरिब देशका धनी नेपाली, जसको सवारीका लागि भित्रिएका छन् सवा ११ करोडसम्मका गाडी, कसले चढ्छ!
गायिका बनिन् नाईका सुष्मा कार्की गाईन् यस्तो गीत ! ( हेर्नुस भिडियो )
Very Bold Nepali Veterinary Doctor Tiktak Viral, Who is he? (Video)
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि आयो खुशी खबर ! अब यस्तो गर्नु नपर्ने !
यसै त गर्मी, त्यसमाथि नम्रता मल्लको फोटोसुट ! (7299)
रश्मिकाले छोटो ड्रेस सम्हाल्न नसक्दा भित्री बस्त्र देखियो, सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइन (भिडियो) (7204)
मतदाता परिचय पत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने (5732)
अनुभवलाई उमेरले दियो धोका (5597)
डिभोर्सपछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन अमात्य , भन्छिन मेरो अनुहारका कारण … (5312)
पललाई न्याय पाउछ भन्दै रुदै गरिमा शर्मा मिडिया मा (4985)
यी रहेछिन् काठमाडौँका मेयरका उम्मेद्धवार बालेन शाहकी पत्नि (4894)